သင်၏ WINDOWS 10 ရက်နေ့တွင်နားကြပ်ထိန်းညှိဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows ကို 10 ရက်နေ့တွင် headphone က Settings
အတော်များများသည်အသုံးပြုသူများအဆင်ပြေစေရန်သို့မဟုတ်အလေ့အထများ၏အကြောင်းပြချက်များအတွက်သော်လည်း, အစားနားကြပ်ရဲ့ကွန်ပျူတာစပီကာကိုချိတ်ဆက်ရန်ပိုနှစ်သက်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အသုံးပြုသူများအပင်စျေးကြီးမော်ဒယ်များထဲမှာ, အသံအရည်အသွေးနှင့်အတူမကျေနပ်များမှာ - device ကိုမှားယွင်းစွာ configured သို့မဟုတ်အားလုံးကိုမှာမပြုပြင်လျှင်မကြာခဏဒီဖြစ်ပျက်။ ဒီနေ့က Windows 10 ထိန်းချုပ်မှုပြေးကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်နားကြပ် configuration ကိုနည်းလမ်းများအကြောင်းကိုပြောပြပါ။
နားကြပ် setup ကိုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အသံ output ကိုကိရိယာ၏သီးခြားစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကို windose ဒသမဗားရှင်းမှာတော့များသောအားဖြင့်မလိုအပ်ပေမယ့်ဒီစစ်ဆင်ရေးကိုသငျသညျအခွင့်အလမ်းများကိုနားကြပ်များအများဆုံးလုပ်ခွင့်ပြုမထားပေ။ ဒါဟာတစ်ခုခုအသံကဒ်စီမံခန့်ခွဲမှု interface နဲ့စနစ်ကအရင်းမြစ်များကတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ရဲ့ပြုမယ့်ပုံကိုကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Windows နဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်နားကြပ်တက်ချိန်ညှိခြင်း 7
Method ကို 1: အသံကဒ်ကိုစီမံခန့်ခွဲ
ပုံမှန်အားဖြင့်, ထို controller ကို output ကိုသံကိုကဒ်စနစ် utility ကိုထက်အသေးစိတ်ညှိနှိုင်းမှုခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီ tool များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို install ကဒ်အမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ တစ်ဦးဖော်ပြထားတာဥပမာအဖြစ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးလူကြိုက်များဖြေရှင်းချက် Realtek HD ကိုသုံးပါ။
ခေါ်ရန် "Control Panel ထဲက": ပွင့်လင်း "ရှာရန်" နှင့်တစ်ဦး string ကိုတစ်ဦးစကားလုံးစာရိုက်စတင်ရန် panel ကထို့နောက်ရလဒ်အပေါ်-click နှိပ်ပြီးထားခဲ့တယ်။
Read more: ဘယ်လိုက Windows 10 ရက်နေ့တွင် "Control Panel ထဲက" ဖွင့်လှစ်
icons များရဲ့ Display ကို Switch "Control Panel ထဲက" mode ကို "အကြီးစား"ပြီးတော့ကိုခေါ်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေ "HD ကို Manager က" (စဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါစေ "Manager က Realtek HD ကို").
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Realtek များအတွက်အသံ drivers တွေကို Download လုပ်ပြီး install
(ညီတူညီမျှကော်လံကဲ့သို့) headphone က Settings tab ကိုအပေါ်ဖန်ဆင်းထားသည် "Speakers"အဆိုပါ default အပွင့်လင်း။ အဓိက parameters တွေကိုလက်ျာနှင့်လက်ဝဲဘက်စပီကာနဲ့ volume အကြားချိန်ခွင်လျှာ setting နေကြသည်။ တစ်မှတ်သားသိနိုင်လူ့စကားကိုနားထောငျ၏ပုံသဏ်ဌာနှင့်အတူအသေးစားခလုတ်ကိုသင်သည်သင်၏ကြားနာကာကွယ်ပေးရန်အများဆုံးအသံအတိုးအကျယ်ကန့်သတ်ခွင့်ပြုထားသည်။
ညာဘက် pane ထဲကတစ်ဦး connector ကို configuration များဖြစ်ပါသည် - ပုံရိပ်မှာနားကြပ်နဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းများအတွက် joinable input ကိုအတူအမှန်တကယ်မှတ်စုစာအုပ်ပြသ။ ဖိုင်တွဲတစ်ခုအိုင်ကွန်နှင့်အတူခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအဆိုပါဟိုက်ဘရစ်ဆိပ်ကမ်းအသံ parameters များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ယခုငါတို့သီးခြား tabs များပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းတိကျသော setting များကိုသွားပါ။ အပိုင်း "နာယက Configuration" option ကိုတည်ရှိသည် "ပတ်ပတ်လည်အသံနားကြပ်"ဘယ်အိမ်ကဇာတ်ရုံ၏အသံတုပရန်ကြောင့်အတော်လေးယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်စေသည်။ သို့သော်အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြည့်စွက်ရန်လိုအပ် Full-size ကိုနားကြပ်ကိုပိတ်လိုက်ရသည်။
inset "အသံ Effect" ဒါဟာတစ်ဦးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့် setting များပါရှိသည်, စငျသညျရလာဒ်ကဒိ၏ပုံစံအတွက်တန်းတူသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုနှင့်ကို manual mode မှာအပြောင်းအလဲများ၏ကြိမ်နှုန်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
အမှတ် "စံ Format ကို" နေရာလေးကိုဂီတချစ်သူများ: ဤအပိုင်း၌သငျသင်နှစ်သက်တဲ့နမူနာမှုနှုန်းနှင့်အနည်းနည်းနှုန်းကိုပြန်ဖွင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ရွေးချယ်မှုများရွေးချယ်ခြင်းတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးရယူနေသည် "24-bits, 48000 Hz"သို့သျောလညျးမဟုတျဘဲအပေါငျးတို့သနားကြပ်လုံလောက်စွာကြောင့်မျိုးပွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ option ကို setting ပြီးနောက်, သငျသညျတခုတိုးတက်မှုသတိထားမိကြဘူး, ဒါကြောင့်ကွန်ပျူတာအရင်းအမြစ်များကိုကယ်ဖို့အနိမ့်အရည်အသွေးကိုတင်ထားရန်သဘာဝကျပါတယ်။
နောက်ဆုံး tab ကို PC များနှင့် laptop ၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များမှတိကျတဲ့ဖြစ်ပြီး, device ကိုထုတ်လုပ်သူအနေဖြင့်နည်းပညာပါရှိသည်။
settings ကို Save ကိုသင်ရိုးရှင်းသောကလစ်နှိပ်နိုင် "အိုကေ"။ အခြို့သောရွေးချယ်စရာများအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ကွန်ပျူတာကို restart လုပ်ဖို့လိုအပ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါ။
တချို့ကသံကိုကတ်များမိမိတို့ကိုယ်ပိုင် software များကိုရှိသောနိယာမ၏ဘာမျှမကအသံပစ္စည်းကိရိယာများမန်နေဂျာ Realtek ကှာခွားမထားဘူး။
Method ကို 2: ဇာတိ OS ကိုနည်းလမ်းများ
အသံပစ္စည်းကိရိယာများ၏လွယ်ကူသော setup ကိုစနစ် utility ကိုအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည် "အသံ"ဘယ် windose အပေါငျးတို့သဗားရှင်းအတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပြီး, အတွက်သက်ဆိုင်ရာကို item နှင့်အတူ "န့်သတ်ချက်များ".
ဖွင့်လှစ် "န့်သတ်ချက်များ" ဆက်စပ်မီနူးကိုအသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း "Start" - လိုချင်သောကို item ပေါ်တွင် left ကိုနှိပ်ပါ, ထို့နောက် right-click, ထိုဒြပ်စင်များ၏ခေါ်ဆိုခဖို့ cursor ကိုရွှေ့။
ထို့အပြင်ဖတ်ရန်: အဘယ်သို့ငါက Windows 10 မှာ "Options ကို" မဖွင့်ကြပါလျှင်
အဓိက window ထဲမှာ "န့်သတ်ချက်များ" ယင်းဂျသနျ့ "စနစ်".
ထိုအခါမှ scroll, လက်ဝဲလက် menu ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် "အသံ".
ပထမတစ်ချက်မှာကဒီမှာနည်းနည်းချိန်ညှိခြင်း။ လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးစွာသင့်ရဲ့နားကြပ်ထိပ်ပေါ်မှာ drop-down menu ကို select လုပ်ပါ, ထို့နောက် link ကို click နှိပ်ပြီး "စက်ပစ္စည်း Properties ကို".
ရွေးထားသည့်ကိရိယာကိုသင်အမည်ပြောင်းသို့မဟုတ် disable, ဤ option ၏အမည်နှင့်အတူ checkbox ကိုသတိပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစစျေးကြီးမော်ဒယ်များအပေါ်အသံမြှင့်တင်ရန်နိုင်သည့် surround sound အင်ဂျင်၏ရရှိနိုင်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အရေးအပါဆုံးအချက်ကိုမြင်ရဖို့ဖြစ်ပါတယ် "Related န့်သတ်ချက်များ", လင့် "အဆင့်မြင့်စက်ကိုဂုဏ်သတ္တိများ" - ကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
ဒါကသီးခြားပြတင်းပေါက် devaysa ဂုဏ်သတ္တိများဖွင့်လှစ်။ အဆိုပါ tab ကိုသွားပြီး "Levels နဲ့" - ကဒီမှာသင်နားကြပ်ကို output ၏ခြုံငုံအသံအတိုးအကျယ်မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။ ကြယ်သီး "လက်ကျန်" ဒါဟာသင်သီးခြားစီလက်ဝဲနှင့်လက်ယာလိုင်းများများအတွက်အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းညှိဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
နောက်တစ်နေ့ tab ကို, "တိုးတက်မှု" သို့မဟုတ် "မြှင့်တင်"ကတစ်ခုချင်းစီကိုအသံကဒ်မော်ဒယ်ကွဲပြားခြားနားလှပါတယ်။ Realtek အသံကဒ် setting များကိုတွင်အောက်ပါအတိုင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။
အပိုင်း "အဆင့်မြင့်" ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်း, အသံအထွက်၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်အနည်းနည်းနက်ရှိုင်း၏ parameters တွေကိုအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုအကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသားပါရှိသည်။ သို့သော် controller ကို Realtek မတူဘဲတဦးတည်းအသီးအသီးဂျနားထောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကအားလုံးကို options များသီးသန့် mode ကိုဖြစ်ကြသည်ကို disable လုပ်ဖို့အကြံပြုသည်။
inset "ပတ်ပတ်လည်အသံက" ဘုံနည်းလမ်းများအနေဖြင့်တူညီသော option ကိုတခုနဲ့ထပ် "န့်သတ်ချက်များ"။ လူအပေါင်းတို့သည်တပ်မက်လိုချင်သောအပြောင်းအလဲလုပ်ပြီးနောက်ကလစ် "Apply" နှင့် "အိုကေ" အဆိုပါညှိနှိုင်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်း၏ရလဒ်များကိုကယ်ဖို့။
"Control Panel ထဲက"
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုရန်သင့်နားကြပ်ကိုချိတ်ဆက်လျက်ဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက" (ကြည့်ရှုပါ။ ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်း), ဒါပေမယ့်ဒီအချိန်စာလိပ် "အသံ" သူ့ကိုသွားပါ။
အမည်ရှိပထမဦးဆုံး tab ကိုတွင် "ပြသမှု" အသံက output ကိုအားလုံးကိုရရှိနိုင် device ကိုဖြစ်ကြသည်။ ချိတ်ဆက်ထားပြီးနှင့်အသိအမှတ်ပြုထွက် grayed မသန်စွမ်း, မီးမောင်းထိုးပြ။ built-in စပီ laptops ဒါ့အပြင်ပြသလျက်ရှိသည်။
သက်ဆိုင်ရာတံဆိပ်သူတို့နာအောက်မှာဖော်ပြပေးရပါမည် - သင့်နားကြပ်ကို default device ကိုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြသည်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ အဘယ်သူမျှမလျှင်, ကိရိယာနှင့်အတူအနေအထားဖို့ cursor ကိုရွှေ့, mouse ၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ပုံမှန် Make".
တစ်တစ်ခုတည်းကို item ကို set up လက်ဝဲ button ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ် select လုပ်ပါ, ထို့နောက်ခလုတ်ကိုသုံးစွဲဖို့ "Properties ကို".
application တစ်ခုကနေနောက်ထပ် device ကိုဂုဏ်သတ္တိများခေါ်သောအခါသော tabs များနှင့်အတူတူညီ box ကိုပုံပေါ် "န့်သတ်ချက်များ".
ကျနော်တို့ system ပေါ်တွင်မူတည်ဘူးသောနားကြပ်သူတို့ကိုယ်သူတို့ settings ဆံ့ကျနော်တို့ (ထိုကဲ့သို့သောဂီတကစားသမားကဲ့သို့) အချို့သော Third-party applications များသတိပြုပါ, အနှစ်ချုပ်ရန်က Windows 10 running ကွန်ပျူတာများအပေါ်နားကြပ် setting များကိုအဘို့နည်းလမ်းများစုံစမ်းပြီ။